Usoro ihe omuma na-atụ aro ụzọ iji kọọ akụkọ aghụghọ na scams
Ọtụtụ ndị nwe ụlọ na ndị na-emepe emepe enwetawo nghọgbu aghụghọ na ịntanetị.N'ụzọ dị ịtụnanya, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ahụ a na-egbu ahụ adịghị akọ ihe ọ bụla. Ọtụtụ mgbe, ndị ihere ahụ na-eme ihere na ha na-adaba na ngbochi ma ọ bụ ọbụna na-enweghị olileanya.N'ihe a, ọ bụ ihe kachasị mkpa iji kọọ akụkọ ntanetị na aghụghọ iji gbochie ndị omempụ intanet site na mwakpo ndị ọzọ ma ọ bụ ndị mmadụ - medical equipment appraisals. Otuaghaghị inwe mmụọ ịlụ ọgụ. Tụkwasị na nke ahụ, e nwere ọtụtụ òtù dị njikere inyere ndị ahụ metụtara aka. A mpụ mere site naa na-akwụkwa ịntanetị ntaramahụhụ.
Ya mere, olee otu onye na-ahụ maka ịntanetị, onye nwe saịtị ma ọ bụ onye na-arụpụta akụkọ nwere ike ịghọ aghụghọ ma ọ bụ na-emejọ?Kedu ụfọdụ n'ime ihe ojoro na-agbagha na ego? Chọpụta na edemede a site n'aka Andrew Dyhan, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọcha .
Ntanetị ịntanetị / ego nchịkwa akụkọ.
Ụlọ Ọrụ Mkpesa Mpụ na Intanet (ICCC) bụ ihe mbụ eji eme ihe. Nke a bụotu mmekorita nke di n'etiti National White Collar Crime Centre na United States Federal Bureau of Investigations. Dị ka ịntanetịndị ọkachamara, ICCC so n'ime ntanetị kachasị mma maka ịkọ akụkọ aghụghọ ndị ọzọ na-agụnye hacking (ma ọ bụ intrusion kọmputa), Ịzụ ahịaNzuzo (Egwuregwu akụ na ụba), ohi ohi na ihe ndị ọzọ na-akpata Cyber ​​Attacks. Otú ọ dị, otu onye nwere ike ịkọ akụkọ ọ bụla mpụ ọ bụladaba n'ime akwukwo a edere obuna ma ha chere na ime mpụ bu obere..Ọzọkwa, ọ bụrụ na mpụ adịghị ada n'okpuru usoro ICCC,ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịduzi onye a na-enye nsogbu na ụlọ ọrụ dị mkpa. N'ihi ya, ICCC bụ ikpo okwu nke na-emepe ọnụ ụzọ maka ndị niile metụtara ntanetị na aghụghọ.
Nke abuo, Ụlọ ọrụ Business Better Business nke United States na Canada na-enye ebe nrụọrụ weebụmaka ndị ahịa na-enyere ndị na-enyocha ojoro aka ịkọ mkpesa banyere ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ntanetị na ndị ọzọ. Tụkwasị na nke a, ndị e merụrụ ahụnwekwara ike ịchọọ nchekwa data nchekwa nke ụlọ ọrụ a iji gosi ma ọ bụrụ na otu onye ahịa nwere mkpesa ndị ọzọ gbasara ha. Ọzọkwa,a na-agba ndị na-eme mkpesa ume ịme nyochaa ma kpebie ma ọ bụrụ na emeela mkpesa ọ bụla megide onye na-ere ịntanetị.
Nke atọ, Ụlọ Ọrụ Ịntanetị Ịntanetị nke Ịntanetị bụ United Statesụzọ maka ntinye akwụkwọ ịntanetị. Ihe ikpo okwu kacha mma maka mkpesa dịka mkpesa phishing, ozi ịntanetị, mkpesa ndị ahịamgbasa ozi ịntanetị na ịntanetị ego. Ebe nrụọrụ ahụ na-enyekwa njikọ maka ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị na-ejide akụkọ nyocha maka aụdị ụdị mpụ online.
Na-esote, Craigslist nwere peeji nke raara onwe ya nye ngbochi scamming na mgbakwunyeiji nye ihe omuma banyere usoro akuko na ndi otu ndi Craigslist kpagburu. Enwetakwu ihe ọmụma dị naUmu akwukwo Craigslist banyere otu esi emeso scams n'oge obula ha biliri.
Ụlọ ọrụ eBay Security Center bụ ihe ọzọ na-eme maka General Safety Marketplace. Ọenyere ndị na-ahụ egwu aka na ịkọ akuko na ịgha ụgha na ndị ọchịchị dị mkpa. Ọzọkwa, eBay Security Center na-enyendị mmanye iwu maka usoro iji guzobe ma ọ bụrụ na scammer na-anwa ịzụta ihe ahia zuru ohi. Akụkụ a dị ezigbo mkpanye ndị nke ohi.
N'ikpeazụ, Facebook Nche peeji nke na-enye ohere ka onye na-ese aja ojoo na-akọ akụkọ aghụghọ, ọgba agharangwa, akukọ akaụntụ, spam ma ọ bụ ihe ọ bụla metụtara ọgụ Facebook. Emela ihere. Na-akọ ndị na-aghọ aghụghọ iji gbochie nsogbu n'ọdịnihu.